घर कडा भएका कारण लव पार्ने गर्नै पाईएन–प्रदिप खड्का - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
अभिनेता प्रदिप खड्का अभिनित सिनेमा ‘प्रेम–गीत २’ साउन १३ गते रिलिज हुँदैछ । उनले आफ्नै प्रोडक्शन हाउसबाट बनेको सिनेमा “स्केप”बाट अभिनयको शुरुवात गरेका हुन् । डेब्यू सिनेमाबाट खासै चर्चा र सफलता नपाएका प्रदीपलाई दोस्रो सिनेमा ‘प्रेमगीत’ले परिचित गरायो । अझ भन्ने हो भने उनी यहि सिनेमाबाट रातारात स्टार बनेका हुन् । अहिले ‘प्रेमगीत’को सिक्वेलको प्रमोशनमा हिँडेका प्रदीपले हामीसँग आफनो किशोरावस्था सेयर गरेका छन् ।
चकचके भएपनि पढाईमा अब्बल
मेरो जन्म ललितपूरको एकान्त कुनामा भएको हो । मेरो परिवारमा ममी, बाबा, म र बहिनी छौँ । मेरो हजुरबुबा र हजुरआमा भने गाँउमा हुनुहुन्छ । म भने बुबा, ममी र बहिनी सँग बस्छु । सानो परिवारमा भएका कारण हामी बीच सबै कुरा सेयर हुन्छ । ममी र बहिनी भन्दा पनि म बाबा सँग नजिक छु ।
सानोमा म एकदमै चकचके थिएँ तर पढाईमा भने राम्रो थिएँ । यहि कारण म सबको प्यारो थिएँ । स्कुलमा प्रथम हुने विद्यार्थीलाई कलम कापी दिने चलन थियो । मैले पाईन भनेर घरमा गएर रुन्थें । कापी कलम पाउनकै लागि पनि मैले पढाईमा निकै मेहेनत गर्ने गर्थेँ । मेहेनत गरेपछि त म कक्षामा सधैँ प्रथम हुन थालेँ । एस.एल.सी पनि राम्ररी पास गरें मैले । एस.एल.सीमा मेरो ८२ प्रतिशत आएको छ ।
एस.एल.सी दिँदासम्म धरहरा देखेको थिएन
घर र स्कुल नजिक भएका कारण स्कूल बंक गर्ने काम कहिल्यै पनि गरिन । घरमा सबै कडा भएका कारण रिङ्गरोड कटेर आउने सम्भावना नै हुँदैनथ्यो । एस.एल.सी दिईसक्दा पनि मैले धरहरा देखेको थिईन । सोझो भएकोले पनि घरमा सबैजना साथीको सङ्गतले बिग्रिन्छ कि ! भनेर डराउनुहुन्थ्यो । म कक्षा–१० मा होस्टेल बसेँ । मैले जति बदमासी गरेपनि घर, साथी र परिवारको बीचमा नै गरेँ । होस्टेल बस्दा केटाहरु सबै मिलेर कुस्ती खेल्थ्यौँ । लोडसेडिङ्ग भएपछि पढ्न नपर्ने मज्जा बेग्लै हुन्थ्यो । साथीहरुसँगै भएका कारण होस्टेलमा समय बिताउन सहज हुन्थ्यो । प्राय समय रमाईलो गरी बित्थ्यो । स्कुलमा मेरो ५–६ जना साथीहरु मात्र थिए ।स्कुल पढ्दा म शाकाहरी थिएँ । खाना खाने बेला साथीहरु मलाई भेज खानाको सट्टा मासु भएको खाना दिन्थे । अनि मेरो भागमा भएको मासु उनीहरु खान्थे । पहिले खाना धेरै रुच्दैनथ्यो । यहि कारण पनि म दुब्लो थिएँ ।
माया प्रेम स्वभाविक
किशोरावस्थामा माया प्रेमतिर आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । तर, आमा बाबालाई छोरो प्रेममा पर्ला, के होला ! भन्ने पीर थियो । छोरो प्रेममा नपरोस् भन्ने आमा बुबाको सोच थियो । मलाई सबैले सम्झाउनुहुन्थ्यो । घरको ल्यान्डलाईनमा कसैले फोन गर्यो भने घरमा दुई तीन दिन सम्म तहल्का हुन्थ्यो । घरमा परिवार कडा भएका कारण म घुमफिरबाट टाढै रहेँ । साथीहरु कोही मेरो उमेरका थिए भने कोही म भन्दा ठूला थिए ।
गफगाफ भएपनि माया प्रेममा परिन
म सबै सँग मिल्थेँ । दुई चार दिन गफगाफ भएपनि कोही सँग प्रेममा भने परिन । मायामा नपरेकै कारण धोका पनि पाईन (लामो हाँसो) । मेरो साथीहरुको भने त्यस्तो हुन्थ्यो । कसैले हात काटे, विदेश गएका पनि फर्किए । त्यस्तो त धेरै चिजहरु भए । उनीहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । म कहिल्यै त्यो अवस्थामा भने परिन ।
मेरो साथीहरु ड्रग्स, चुरोट खाने छन् । उनीहरु सँगै हुँदा केही नखाएपनि छुट्टै पारामा रमाईलो गर्न मन पराउँथे म । अरुका कारणले आफू भने कुलतमा पर्नु हुन्न भन्छु म त । आफ्नो लागि के सहि के गलत भन्ने कुरा आफैले छुट्याउनु जान्नु पर्छ । यस विषयमा मलाई मेरो परिवारले पनि धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो । घरमा कडा भएपनि यही गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहि हुँदैनथ्यो । मैले फटा काम गर्दा कुटाइ र गाली दुवै खाएको छु । राम्रो काम गर्दा सबैले आशिष दिनुहुन्थ्यो । मलाई इच्छा लागेको चिजमा भने स्वतन्त्र छोडेको भएर होला मैले सबै कुरा बुझ्दै गएँ ।
सन्तान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हुर्काइमा भरपर्छ
बुबा आमाले सन्तानलाई हुर्काउँदा निकै ध्यान दिनुपर्छ । लामो समय सम्म एउटै कुरामा टिकिराख्न म सक्दिन । जे कुरामा पनि अलग किसिमको परिवर्तन चाहिन्छ । त्यो भएर पनि होला साथीहरु पनि फेरी–फेरी बनाउँथे । आफ्नो लागि के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरा आफैंले बिचार गर्नुपर्छ । आफू राम्रो बाटोमा गईराछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुनुपर्छ । चुरोट वा ड्रग्स खाने साथीहरु सँग बस्दैमा तपाई पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, तपाईँमा त्यो लत लाग्छ भन्ने हुँदैन । तर, उनीहरुले एक चोटी खाऊ भन्छन् भने तपाई निकै सर्तक हुनुपर्छ । सबै मान्छे खराब पनि हुँदैनन् । कसैलाई परिस्थितिले पनि खराब बनाएको हुनसक्छ । बिस्तारै एकले अर्कालाई बुझ्नु पर्छ । बिग्रिने भनेको १४–१५ को उमेरमा हो । त्यो बेलामा आफूले आफै माथि निगरानी राख्नुपर्छ । आमा बुबाले गरेको गालीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । आमा बुबाले पनि सन्तानहरुको कुरा बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुले कडा गर्नुहुन्छ भने पनि गम्भिर रुपमा लिनुहुन्न । यो पारामा गयौँ भने सबैलाई सजिलो हुन्छ ।
रक्सी,चुरोट र गुट्का खान्छु भन्ने भ्रममा बाबा ममीको कुटाई खाएः प्रदिप खड्का
प्रदिप खड्काको सिनेमा प्रेम गीत–२ ले दर्शकको निकै माया पाईरहेको छ । अडियन्स र क्रिटिक्सको राम्रो प्रतिक्रिया पाएर चलिरहेको सिनेमा प्रेम..
ह्याप्पि वर्थ डे प्रदिप– जान्नुहोस प्रदिप खड्काका ४ रमाइला पक्ष